Posted by MelodyMon at 2:07 AM No comments:
တိရိစ္ဆာန်ဗေဒင်ဆိုတာ မွေးနေ့ နဲ့ တွက်တဲ့ ဗေဒင်ပေါ့။
မွေးနေ့သိရင် တခြားလူတွေရဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေကိုပါ
သံစဉ်တွက်ကြည့်တော့၊ သံစဉ်က ခြင်္သေ့ တဲ့။
အမှားအယွင်းမရှိ၊ Perfect ဖြစ်နေမှကြိုက်တဲ့ ခြင်္သေ့ဟာ
( ညည်းတော့ညည်းတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မလုပ်နိုင်ဘူး။
ပင်ပန်းတယ် လို့တော့ ပြောပါတယ်။ )
လည်းဒီလိုပဲပေါ့လေ။ သူများနဲ့မတူ၊ အထူးတလည်
ဆက်ဆံခံရတာကိုကြိုက်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ. ရာထူး၊
( ဒါကတော့ ဟဲဟဲ ။ လူတိုင်းတူတူပဲဟုတ်ဖူးလား။ )
်တာကြောင့်။ ဈေးကြီးရင်ပစ္စည်းကောင်းဘဲ လို့
( လှရင်ဈေးပေါလည်းကြိုက်ပါတယ်နော်။ )
ဆွေမျိုး၊ အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ ပါတ်ဝန်းကျင်ရဲ.အမြင်ကို
ပေါ့လေ။ အလုပ်တွေ၊ ကျောင်းတွေရွေးတဲ့အခါမှာ
(မှန်ပြန်ပြီ။ မကောင်းမှန်းသိလို့ ဒီအကျင့်ကိုပြင်နေ
တယ်။ ဒါပေမယ့် လုံးလုံးတော့မပျောက်နိုင်သေးဘူး။)
၅။အိပ်ရေးမ၀ခြင်းနဲ့ ဗိုက်ဆာခြင်းဟာ ခြင်္သေ့တွေရဲ.
အိပ်ရေးမ၀တဲ့အချိန်၊ ဗိုက်ဆာတဲ့အချိန်မှာ စိတ်တို
တတ်ပြီး သူများကို မဲတတ်တယ်။
( မှန်လိုက်လေခြင်း )
ဆိုရင် စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့နေပေမယ့် အိမ်မှာဆိုရင်တော့
ဖြစ်သလို။ အခန်းဆိုလည်း ရှုပ်ပွနေတတ်တယ်။
( ရှုး - တိုးတိုး )
Sugoi ( အရမ်း ၊ တအား ) , Zettai (အသေအချာ)
ဥပမာ - လှတယ် ဆိုရင် (အရမ်းလှတယ်။) ဆိုတာမျိုး။
ကဲ - ဗေဒင်တွက်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီကိုနှိပ်လိုက်။
နှေးတုံ့နှေးတုံ့ လုပ်နေတာကိုမုန်းပြီး နေတာထိုင်တာ
အလုပ်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်၊ လျှောက်လည်တာ ပဲဖြစ်ဖြစ်
တယ်။ ကိုယ့်အကြိုက်ကိုတွေ့သွားပြီဆိုရင် အားလုံး
sense လည်းကောင်းတယ်။ မိုနိုတုန်း ဖက်ရှင်တွေကို
အမှားအမှန်၊ အဖြူအမည်း သည်းသည်းကွဲကွဲလုပ်ရမှ
အငြိမ်မနေတတ်ဘူး။ အလုပ်ရှုပ်နေတတ်ပြီး အမှားမှား
လူတွေများတဲ့ ၊ စည်ကားတဲ့နေရာမျိုးကိုသဘောကျတယ်။
သူများနဲ့တူနေရင်မကြိုက်ဘူး။ ထူးခြားတယ် လို့အပြောခံရတာကို
သဘောကျတယ်။ အစားစားပုံ၊ ရေချိုးပုံ၊ အလုပ်လုပ်ပုံတွေအပြင်၊
ချထားလေ့ရှိတာကြောင့် သူများကြောင့် ကိုယ့်ရဲ.paceကပျက်သွားရင်
နောက်ပြီးသူများကို ဟိုလိုဒီလို ဝေဖန်ရတာကိုသဘောကျတယ်။
အတွက် မနက်တစ်မျိုး၊ ညတစ်မျိုးပြောတတ်တယ်။
ပါတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေရဲ. ဂရုစိုက်မှု၊ ချင်ခင်မှုကိုမက်မောတယ်။
သူ့ကိုဂရုမစိုက်၊ မချစ်ခင်ရင်စိတ်ကောက်တတ်တယ်။ ဒါပေမယ့်
က သူ့ရဲ.ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုပဲ။ သဘောကျတဲ့ (သို့) သဘောမကျတဲ့
လူတွေ၊ပစ္စည်းတွေ ကွဲကွဲပြားပြားရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြိုက်တာ(သို့)
တစ်ယောက်ယောက်ကတော့ ကူညီပေးမှာပါပဲ ဆိုပြီးသူများအပေါ်မှာ
မှီခိုတတ်တယ်။ အထူးသဖြင့် မိသားစု၊ ချစ်သူ အပေါ်မှာ အရမ်းမှီခို
တယ်။ အသင်အပြတော်တယ်။ သဘာဝပစ္စည်း၊ တိရစ္ဆာန်တွေချစ်တယ်။
Posted by MelodyMon at 2:28 PM3comments:
အဲဒါနဲ့တည်းဖြတ်တဲ့စတပ်ဖ်တွေက ဒါဘယ်သူ့အသံလဲ ဆိုပြီး
နောက်အနောင်ဆာ အမတစ်ယောက်က ရုတ်တရက်ကြီး
( ဟနကို ) <---- [ဂျပန်အမျိုးသမီးနာမည်] လို့ထပြောတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဘေးကဒါရိုက်တာမမ က ( ဟနကို ကဘာဖြစ်လဲ ) လို့
လှမ်းမေးလိုက်တော့ ခုန ဟနကို လို့ပြောတဲ့အမက
(ဟင်! ဘာပြောလိုက်လို့လဲ။ ဘာမှမပြောပါဘူး) လို့ပြန်ပြောတယ်။
သူ့ဖာသာသူပြောလိုက်မှန်းမသိလိုက်ဘူး။ မထူးဆန်းဘူးလား။ သံစဉ်ကအဲဒိနေ့ကအစီအစဉ်ကိုနားထောင်လိုက်ပေမယ့်
တဲ့ထဲကပြန်ရှာပြီးနားထောင်ရမယ်လေ။ ဒါနဲ့ သံစဉ်နားထောင်ချင်တယ်
နောက်တခုက အဲဒိနေ့အစီအစဉ်တစ်ခုထဲကွက်ပျောက်နေတယ်။ ခွေတွေကိုထိမ်းသိမ်းတဲ့ကောင်မလေးကNHKမှာအလုပ်လုပ်လာတာ
ကြာလှပြီ။ ဒါမျိုးတခါမှမမှားဖူးဘူးဆိုပဲ။ တော်တော်ထူးဆန်းတာပဲ။
ဟနကို က အမျှလိုချင်လို့ ဒါမှမဟုတ် သူရှိနေတာကိုသိစေချင်လို့
သရဲတွေ နာနာဘာဝတွေ က လူတွေရဲ့စိတ်ကိုControl လုပ်နိုင်တယ်
အရင်ကသံစဉ်ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ [ သူငယ်ချင်းရဲ. တစ္ဆေအတွေ့အကြုံ ] မှာ
ဖတ်ကြည့်နော်။ အဲဒိလို Control လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းနဲ့ အနောင်ဆာ
အမကို ဟနကို ဆိုတဲ့သူ့နာမည်ကိုပြောခိုင်းတာဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။
Posted by MelodyMon at 11:34 PM No comments:
Posted by MelodyMon at 1:21 AM 1 comment:
The little one I love most!
I will never let you die!
Welcome to my little garden!
New Members To My Garden!
1.Kiss Me Quick ပန်းရောင်အနု
2.Kiss Me Quick ပန်းရောင်အရင့်
Posted by MelodyMon at 1:46 AM No comments:
ဒီနေဆံပင်သွားညှပ်တယ်။ အခုခတ်စားနေတဲ.PICO M3Dဆိုတဲ.Treatmentလုပ်ခဲ.တယ်။
Posted by MelodyMon at 1:17 AM
It is raining outside. The sound of raindrops reminds me ofasong called "Zenbu Kimi Datta!" sung by Yamazaki Masayoshi. It'savery good song.
Labels: Diary, Japanese Songs
I have been using Zawgyi Web Text Editor for I couldn't install Zawgyi keyboard. But [http://www.mysteryzillion.com/] is not avalible these days and I can't type in burmese.It's terrible. How can I install Zawgyi keyboard? Sate nyit lite tar....
Aku ta law sate nyit sayar tway gyee bae:! really tired! so tired!
Posted by MelodyMon at 12:48 AM2comments:
Posted by MelodyMon at 5:12 PM 1 comment:
Posted by MelodyMon at 2:28 AM No comments:
Sarr par own!
Posted by MelodyMon at 12:52 AM 1 comment:
以心伝心　ｂｙ　１９
Posted by MelodyMon at 12:46 AM 1 comment:
君のすべてに by Spontania feat JuJu
Posted by MelodyMon at 12:36 AM No comments:
This one is called KIKYOU!
How cute is the little bud!
Posted by MelodyMon at 9:39 PM No comments:
Summer Song by YUI
泣き夏　By MihimaruGT & Soffet
Posted by MelodyMon at 1:45 AM No comments:
အခုတစ်လော ဘလော့ဂ်လည်းမရေးဖြစ်၊ လက်သည်းနီဓါတ်ပုံအသစ်တွေလည်းမတင်ဖြစ်ဘူး။
မနက်ဖြန်ကျရင် အလုပ်မရှိဘူး။ တစ်နေရာရာသွားဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
Posted by MelodyMon at 1:34 AM No comments:
Posted by MelodyMon at 1:54 AM No comments:
Posted by MelodyMon at 1:50 AM No comments:
သြော် - ခုတလော ကြော်ငြာမလုပ်တာတောင်ကြာသွားပြီ။
ဂျပန်သီချင်းတွေကိုအင်တာနက်ကနေလွှင့်လို့မရတော့ နားထောင်လို့တော့သိပ်မကောင်းဘူးပေါ့။ ဒီအပါတ်လွှင့်သွားတဲ့ သီချင်းက Def Tech အဖွဲ့ရဲ. My Way နဲ့ ありがとうの詩 ကျေးဇူးသီချင်း ဆိုတဲ့နှစ်ပုဒ်ပေါ့။ Ｙｏｕｔｕｂｅ ကနေပဲ နားထောင်တော့နော်။
Posted by MelodyMon at 1:48 AM No comments:
☆　ကြယ် ☆
ဒီနေ့လည်း ထုံးစံအတိုင်း ညမိုးချုပ်မှအိမ်ပြန်ရောက်တယ်။
ဘူတာကိုရောက်တော့၊ မိုးကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်မိတယ်။
မရှိမှန်းသိရက်နဲ့ ကြယ်လေးတွေကို ရှာဖွေမိတယ်။
တိုကျိုက ညရဲ.ကောင်းကင်ယံဟာ လွမ်းဆွေးဖွယ်ကောင်းလွန်းတယ်။
လသာတဲ့ညတွေမှာ လေညှင်းခံရင်း သီချင်းလေးနားထောင်ပြီး စိတ်ကူးတွေယဉ်ခဲ့တာ ...
အချိန်တွေက အကုန်မြန်တယ်။ ဘယ်အရာမှလည်းမတည်မြဲဘူး။
ဒါ့ကြောင့် . . .
အချိန်တိုင်း၊ အရာတိုင်း၊ လူတိုင်း ကို တန်ဖိုးထားရမယ်နော်။
ဖူး . . . အိပ်ချိန်တန်ပြီ။ မနက်ဖြန် စာမေးပွဲ ၂ ခုတောင်ရှိတယ်။
Posted by MelodyMon at 1:28 AM No comments:
New Color! My First Gradiation! (^_^)
လုပ်နည်းလေးသဘောပေါက်သွားပြီဆိုတော့ နောင်ကိုအမျိုးမျိုးလုပ်ကြည့်လို့ရသွားပြီ။ ဟီဟိ
မနက်ဖြန် ယူခတ(ဂျပန်ရိုးရာဝတ်စုံ) ၀တ်ပြီး မီတမ မာဆူရီပွဲသွားမယ်။楽しみ～♪　ခုတော့အိပ်တော့မယ်။
Posted by MelodyMon at 1:17 AM No comments:
もう一度　One More Time
Posted by MelodyMon at 2:23 AM No comments:
A Trip To Narita San
လှတယ်ဟုတ် ? ပန်းလေးတွေကိုပြောတာနော်။ :P (^_^)
Posted by MelodyMon at 2:16 AM2comments:
တစ်ည . . . ည၁၂နာရီကျော်လောက်မှာ - - - ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဆိုင်ထဲကိုဝင်လာတယ်။
ပြီးတော့ ကောင်လေးက ရယ်ဒီမိတ်ခေါက်ဆွဲပြုတ်ဗူး တစ်ဗူးဝယ်တယ်။ ပိုက်ဆံရှင်းတဲ့ကောင်တာမှာ
သူငယ်ချင်း --- ယန်း ၁၈၀ ကျပါတယ်။ တူ ဘယ်နှစ်စုံထည့်ပေးရမလဲ ။
၀ယ်သူကောင်လေး --- ( နားမလည်တဲ့ပုံစံနဲ့ ) တစ်စုံဆိုရပါပြီ။
သူငယ်ချင်း --- ဟုတ်ကဲ့။
(သြော် ၊ တူတစ်စုံထဲနဲ့နှစ်ယောက်အတူစားမယ်ထင်ပါတယ်လေ) လို့တွေးရင်း ခေါင်းငုံပြီးတူကိုအိတ်ထဲထည့်၊ ပိုက်ဆံယူနေတုန်း
၀ယ်သူ --- မှားသွားတယ်။ တူနှစ်စုံထည့်ပေးပါ။
သူငယ်ချင်းလည်း ( ဖြစ်ရပြန်ပြီ ) လို့တွေးရင်း မော့ကြည့်လိုက်ချိန် ခုနအမျိုးသမီးကကောင်လေးရဲ.ခေါင်းကိုနောက်ကနေ ကိုင်ထားတာကိုတွေ့လိုက်တယ်။
အဲဒါနဲ့ သူသိလိုက်တယ်။ ဒီအမျိုးသမီးက လူမဟုတ်ဘူး။
အဲဒါနဲ့ ကောင်လေးကိုပြောမလို့ကြံလိုက်တုန်း ကြက်သီးဖြန်းကနဲ့ထပြီးသူ့နားနားမှာအခုလိုလာပြောတာကိုကြားလိုက်တယ်။
အဲဒါနဲ့ သူလည်းမပြောတော့ဘဲ တူနှစ်စုံထည့်ပေးလိုက်လေရဲ.။
Posted by MelodyMon at 1:13 AM 1 comment:
ဒါပေမယ့် ၊ တခါတလေကျတော့ . . .
. . . ပူလောင်တယ် . . .
Posted by MelodyMon at 12:54 AM No comments:
Click Here ---> What Age Will You Die?
Posted by MelodyMon at 5:18 PM 1 comment:
. . . ပန်းခြံထဲကတစ္ဆေ . . .
သရဲ တစ္ဆေတွေကိုယုံလား။သံစဉ်ကတော့ယုံတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး။
ဒါပေမယ့် မနေ့ကတော့ မမြင်ခဲ့ရပေမယ့်ကြုံခဲ့ရတယ်။
အဲဒါနဲ့ နှစ်ယောက်သားလေတအေးအေးလေးနဲ့ သစ်သားခုံတန်းပေါ်မှာထိုင်ရင်း
သစ်သားခုံတန်းဆီကိုရောက်ဖို့ သစ်သားလှေကားကိုနှစ်ထစ်၊ သုံးထစ်လောက်
ပြန်မပြောဘဲ သံစဉ့်ကိုစိုက်ကြည့်နေတာနဲ့ '' ဟဲ့ ၊ ငါပြောနေတာကြားရဲ.လား ''
လို့မေးတော့''ဆောရီးဆောရီး ၊ မကြားလိုက်ဘူး။ဘာပြောလိုက်တာလဲ '' တဲ့။
သံစဉ်က နဂိုတည်းကကြောက်တတ်တော့ သူ့ကို '' ငါ့ကို အဲလိုမလုပ်ပါနဲ့။
ကြောက်တတ်လို့ပါ ''လို့ပြောပြီး စကားဆက်ပြောနေတာပေါ့။
ခဏနေတော့တစ်ခါထပ်ပြီး ငြိမ်သွားပြန်ရော။'' ဘာဖြစ်တာလဲ '' ဆိုတော့ ၊
တစ်ယောက်တည်း စိတ်တွေတိုပြီး (ဘာလို့အခုအချိန်မှာလာရတာလဲ။
အမြဲတမ်းအဲဒိလိုဘဲ။ စိတ်တိုတယ်။) ဘာညာ . . . ပြောပြီး
'' သံစဉ် ၊ လာ သွားမယ်။ ''ဆိုပြီးသံစဉ့်ကိုဆွဲပြီး အမြန်လျှောက်ပါလေရော။
ဘုရားစာဆိုပေမယ့် တကယ်ကြောက်နေတဲ့အခါ ဘုရားစာအရှည်တွေကဘာမှ
မထွက်လာဘူး။သရဏဂုံသုံးပါး ဘဲထွက်လာတာနဲ့ အထပ်ထပ်အခါခါရွတ်ရင်း
အဲဒါနဲ့ ပန်းခြံကနေထွက်လာပြီး ခပ်လှမ်းလှမ်းကစားသောက်ဆိုင်ထဲဝင်ပြီးမှ
ဒေါက်ဖိနပ်သံမကြားဘူးလား တဲ့။ သံစဉ်ကတော့ ဘာဆိုဘာမှမကြားဘူး။
ဒါနဲ့ ဘာမှမကြားဘူးပေါ့။သူကတော့ တောက်လျှောက်ကိုကြားနေခဲ့တာတဲ့။
နောက်တော့ မသင်္ကာတာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ ဘယ်သူမှမရှိဘူးတဲ့။
ဒါပေမယ့်သူက ငယ်ငယ်လေးကတည်းကသရဲတစ္ဆေတွေကိုခဏခဏမြင်တတ်တယ်။ အိပ်မက်တွေလည်းလာလာပေးတယ်တဲ့။
အဲဒိတော့မှ အခြေအနေမကောင်းဘူး ဆိုပြီးသံစဉ့်ကိုခေါ်ပြီးထွက်လာခဲ့တာတဲ့။
သံစဉ်ကတော့ ဘာဆိုဘာမှ ကြားလည်းမကြားဘူး။ မြင်လည်းမမြင်ခဲ့ဘူး။
ဒါပေမယ့် အဲဒိနေရာက ရှိမယ်ဆိုလည်းရှိလောက်ပါတယ်။
နည်းတယ်လေ။ သံစဉ့်ကို '' လာသွားမယ် '' လို့ ရုတ်တရက်ပြောလိုက်
အခုတော့ ဗိုက်ဆာလို့ ထမင်းသွားစားလိုက်ဦးမယ်။
Posted by MelodyMon at 10:04 PM 1 comment:
Labels: Diary, တစ္ဆေအကြောင်း
孤独　[ Loneliness ]
ど　う　せ　一　人　に　な　る　の　な　ら
最　初　か　ら　二　人　に　な　ん　か
な　ら　な　け　れ　ば　よ　か　っ　た　。
နောက်ဆုံးမှာ ''တစ်ယောက်တည်း'' ဖြစ်ရမယ့်အတူတူ
အစတည်းက ''နှစ်ယောက်'' မဖြစ်ခဲ့ရင်အကောင်းသား။
''အထီးကျန်မှု'' ကိုခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ ကြိုးစားရဦးမယ်။
Posted by MelodyMon at 1:15 AM No comments:
Posted by MelodyMon at 1:13 AM No comments:
Posted by MelodyMon at 1:12 AM3comments:
အိုရှိဘာန လို့ခေါ်တဲ့ ပန်းအခြောက်လေးလုပ်ပြီး ပန်းအိုးပုံလေးလုပ်
ကြည့်လိုက်တယ်။ ဒီလိုလုပ်ထားလိုက်တော့ အမှတ်တရလေးတွေကို
အရောင်မပျက်ဘဲ နှစ်ပေါင်းများစွာချန်ထားလို့ရတယ်။ မကောင်းဘူးလား။ ဖြစ်နိုင်ရင်အနံ့လေးတွေပါချန်ထားလို့ရရင်ကောင်းမယ်။
ကဲ - မန်မန်သွားစားလိုက်ဦးမယ်။
Posted by MelodyMon at 12:46 AM No comments:
ဟဲဟဲ . . . ဓါတ်ပုံပြောင်းသွားပြီ။ ပြောင်းပေးလို့တော်ပါသေးရဲ.။
ကိုရောက်ခဲ့တယ်။ ကြောင်လေးတွေသွားကြည့်တာ။ နှစ်ကောင်ဘဲရှိတယ်။
ခွေးလေးတွေတော့အများကြီးဘဲ။ ငါးလေးတွေ၊ ငှက်လေးတွေလည်းရှိတယ်။
ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်လိုက်တာတအားဘဲ။ ဒါပေမယ့်ပေးမရိုက်ဘူး။ အဲဒါနဲ့ကြည့်ရုံဘဲ
တယ်လေ။ မတတ်သေးတော့ စိတ်ပင်ပန်းတာရော၊ အိပ်ရေးပျက်လို့လူကနုံးနေ
ဒီနေ့လျှောက်သွားလိုက်ရတော့ စိတ်နည်းနည်းလန်းဆန်းသွားတယ်။ လူကတော့
ဒီနေ့ပန်းခြံထဲကနေ ပန်းလေးတစ်ခက်ခူးလာတယ်။ (မြင်ရင်အအော်ခံရမှာ-ဟီး)
အဲဒိပန်းလေးကို Oshibana လို့ခေါ်တဲ့ ဂျပန်ရိုးရာပန်းအခြောက်အပြားလေးလုပ်
လိုက်တယ်။ အခုထိပန်းလေးတွေကို စာအုပ်ကြားထဲမှာဘဲညှပ်ပြီးသိမ်းထားတာ။
ဒါပေမယ့် အဲဒိလိုဆိုရင်ကြာရင်မေ့သွားနိုင်တယ်။ ပျောက်လည်းပျောက်သွားနိုင်
တယ်။ ဒါကြောင့်၊စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ထဲမှာသေချာကပ်ပြီး နေ့၊ရက်၊နေရာတွေနဲ့
ပန်းဒိုင်ယာရီ စာအုပ်လေးလုပ်မယ် လို့ စိတ်ကူးမိတယ်။ ဒီအပါတ်သွားဝယ်ဖြစ်မယ်
ထင်တယ်။ အိပ်ချိန်နည်းရတဲ့ကြားထဲ အဲဒါစမိရင်အိပ်ရေးပိုပျက်ဦးမယ်နဲ့တူတယ်။
ဒါပေမယ့် လုပ်မှာဘဲ။ (^_^)
ဒီနေ့စိတ်ပျော်နေတော့ ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်မယ်နဲ့တူတယ်။ အိပ်တော့မယ်။
အားလုံးဘဲ . . . အိပ်မက်လှလှမက်ပါစေ။
Posted by MelodyMon at 2:09 AM No comments:
်ခေါင်းကိုက်လိုက်တာ။ ဒီနေ့လည်း အလုပ်ကနောက်ကျတယ်။
စိတ်တွေရှုပ်နေတာနဲ့ ကိုငယ် (အတူတူအစီအစဉ်လုပ်နေတဲ့
အန်အိတ်ခ်ျကေက ကိုငယ်) ရဲ. ပေါထားတဲ့ ၊ အို ဟုတ်ပါဘူး၊
ကြုံတုန်းကြော်ငြာလိုက်ဦးမယ်။ ဒီအပါတ်က မြန်မာနိုင်ငံကအဆိုတော်
ရုပ်ရှင်မင်းသမီး သဇင်က တေးဂီတအစီအစဉ်ကိုလာလည်တယ်။
တိုကျိုကိုရောက်တုန်းရောက်ခိုက် သံစဉ်နဲ့အတူ တေးဂီတအစီအစဉ်ကို
ပြီးတော့ ကိုငယ်တစ်ယောက်တည်း သောတရှင်တွေရဲ.စာတွေကို
သြော် - ပြောရဦးမယ်။
လာတင်ထားတာလေ။ အထင်တွေမှားကုန်မှာစိုးလို့။ ဟီး . . .
Click Here -----> June 07
Posted by MelodyMon at 2:41 AM No comments:
လာလည်ကြသူများအားလုံးသို့ . . .
သံစဉ်မအားတာရော၊ သိပ်ပြီးနေလို့မကောင်းတာရောကြောင့် ဘလော့ဂ်ကိုပစ်ထားရတယ်။ သောကြာနေ့ဆိုရင်တော့ စာမေးပွဲတွေပြီးပြီ။ အဲဒိကျရင်တော့ ဘလော့ဂ်ကိုပြန်ကိုင်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒိကျမှတွေ့ကြတာပေါ့နော်။ အလည်ရောက်လာရင် စီဘောက် ထဲမှာရေးသွားပါဦး။ လင့်ခ်လေးတွေလည်းထားခဲ့ပေးနော်။ ဘယ်ကိုပြန်လိုက်ရမှန်းမသိဘဲဖြစ်နေမှာစိုးလို့။ See U In A Few Days!
Posted by MelodyMon at 1:59 AM No comments: